အနုပညာနှင့် လက်မှုပစ္စည်း - သဘာဝအမှုန့်နှင့်ဆပ်ပြာကုန်ကြမ်းများ Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အနုပညာနှင့် လက်မှုပစ္စည်း classified: အသစ် သဘာဝအမှုန့်နှင့်ဆပ်ပြာကုန်ကြမ်းများ
Please,adminမင်္ဂလာပါရှင့် 🏮Made in Myanmar.📣 ပြည်တွင်းဖြစ်ကိုအားပေးခြင်းဖြင့်ဂုဏ်ယူကြရအောင် နော်.🚩Ⓜ⛲At.Yangoon 👈ရန်ကုန်ကပါနော် .1.ColdProcessExterVergin Coconut oil.🌴🥥🌴🥥🌴🥥🌴🥥🌴🥥🌴 (2)Coconut Oil 3.🐝ပျားရည်(သဘာဝ)4🍯ပျားရည်(မွေးမြူရေး)🍯🌹🐝💐🐝🌷🐝🌼🐝🐝 5.🍂တမာဆီ၊လဘက်ဆီ၊စပါလင်ဆီ၊လာဗင်ဒါဆီ၊🧉🌿🌱🎍☘️🍀 လေးညှင်းဆီ၊ရှားဇောင်းဆီ၊မုန်ညှင်းဆီ၊နမ်းနက်ဆီ🍾🌵🌵🌵🌳🌳🌲🎄 6.�ဆပ်ပြာသီး🍂🍂🍂🍁🍁🍁 7. 🎁 M .MBase Soap👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻 8.🛎Concoon BS.👈👈👈👈👈 9.🌵Alovea Basesoap🌵🌵🌵🌵🌵 10.🐐Goatmilk BS🐄🐐🐏🐐🐏🐐 11.🍯Honey BS🐝🍯🐝🌹🐝🌷🐝💐🐝🍯 12.🍮SheabutterBS👩🏼‍🔬👩🏼‍🔬👩🏼‍🔬👩🏼‍🔬 13.🐌Snail BS🐌🐚🐌🐚🐌🐚🐌🐚🐌 14.🛎ရွှေပိုးဥအိမ်🌟🌕🌕🌕🌕🌕🌕 15.🌟24k Goldရွှေမှုန့်🌠 #24KGold Basesoap🌕🌕🌕 16.🌾GlutaminRice (ဆန်မှုန့်)🌾🍚🌾🍚🌾🍚🌾🍙🌾🌾🌾🌾 17..❄စပ္ပါယ်ပန်းမှုန့်🧚🧚🧚🧚🏿 18.🐟Collagenမှုန့်🧚‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏼‍♀️🧚🏽‍♀️ 19.🐌Snail (အသားဖြူမှုန့်)🐌🐚 20.💟Pink Salt 21.🌵Lemongrass Powder 22.❄အောင်မဲညိုအပွင့်ခြောက် 23.🌺တရုက်စကားမုန့် 24.🥖ကင်ပွန်းသီးခြောက်အမှုန့် 25.🍃တရော်မှုန့် 26.🍋ရှောက်ဘီးလူးသီးမှုန့်😁 27.🌳ဒန်းမှုန့် .28.🍃နွယ်ချိုမုန့် 29.🌿GreenTeaလ္ဘက်စိမ်း 30.🎉Beetroot အမှုန့် 31. 🍠ကန်းစွန်းဥအမှုန့် 32.🥕ဥနီအမှုန့် 33.💛 ရွှေဖရုံသီးအမှုန့် 34. 🍃ဆွမ်းမွှေးအမှုန့် 35.🍏ဇီးဖြူသီးမှုန့် 36.🍊လိမ္မော်ခွံမှုန့် 37.👸ဝက်ခြံပိုးသတ်မှုန့် 38.💉ယားနာအင်ပြင်ပျောက်မုန့်💊 39.ဖောယောင်ကျအမှုန့် 40.🛁ချွေးပေါင်းထုက်အမှုန့် 41.🛀ကျောက်ချဉ်မှုန့် 42.👑သနပ်ခါးမှုန့် 43.🔸နံ့သာဖြူ 44.🔸.စန္ဒကူး . 45.🌸ကံကော်ဝတ်ဆံမှုန့် 46.🌱ကြိတ်မှန်ရွက်မှုန့် 47.🌲သစ်ဂျပိုးအမှုန့် 48.🌿တမာမှုန့် 49.🌵ရှားစောင်းမှုန့် 50.🥔 အာလူးမှုန့် 51.🔸ပယင်းမှုန့် 52.👉 သစ်ကြပိုးမှုန့် 53.🎍ဂျင်းမှုန့် 54.🌚ဝါးမီးသွေး 🌋 55.🌑ဝါးရှာလကာရည် 56.🌰 မင်းဂွတ် သီးအမှုန့် 57.☕ Coffeeမှုန့်(ရွာငံ) 58.🥑ထောပါတ်သီးမှုန့် 59.☘ဆေး မြင်းခွာရွက်မှုန့် 60.🥒 သခွားမှုန့် 61.🍅ခရမ်းချဉ်သီးမှုန့် 62.🎋ဒန့်သလွန်မှုန့် 63.Larvenda ပန်းခြောက် 64.ကရမက်အမှုန့် 65.စိမ်းပြာရေညှိမုန့် 66.ရေညှိ 67.သဲဆပ်ပြာမုန့် 68.စစ်ဆပ်ပြာမုန့်(စိမ်းပြာရေညှိမုန့် အမျိုးတူ) 69.တင်းတိက်ပျောက်အမှုန့် 70-ပင်လယ်ရွံ့မုန့်န့(clay powder) 71-ArrowRootPowder🥖 သဘာဝအမှုန့်စစ်စစ်များသာဖြစ်ပါသည်။ ပစ္စည်းအရည်အသွေးကောင်းပီးတော့အရောနှောကင်းတဲ့အမှုန့်များကို ကိုယ်တိုင်လည်းအသုံးပြုတာတွေကို ရောင်းပေးတာမို့ စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင့်🤞orderတင်ချင်ရင်cbမှာပြောပေးပါရှင်🖋📝📩🎉ရနိကုန်မြို့. 📱09777769051 📞Viber.09253901779 မိုးတွင်းမို့တချို့အမှုန့်လေးတွေမရသေးပါဘူးနော်😱အသီးမှုန့်လေးတွေသဘာဝ ထုတ်ကုန်များ အတွက် ရောင်းချင်လို့ပါရှင် 🎉🎉🎉🎉🛒🛍 ့စျေးမရေးပေးတာကတော့ရာသီဥတုနဲ့အချိန်အခါကြောင့်စျေးနုန်းအတက်အကျဖြစ်တတ်လို့စုံစမ်းယုံမမေးပဲနဲ့တကယ်ဝယ်မှမေးပါရှင်😃 Organics Myanmar Rose Marry Ruby Myanmar https://www.facebook.com/magic.organicnaturalbeautycaresoapmyanmar43142834/ M.Magic